As of Thu, 06 Aug, 2020 07:30
दोलखा-सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको अवरुद्ध काम सुरक्षाकर्मी लगाएर सुचारु गराइएको छ । टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मीसमेत खटाएको हो । टावर ठड्याउने ठाउँमा स्थानीयले रुट सार्न माग गर्दै अवरोध गरेपछि आयोजनाको काम समयमा पूरा हुन सकेको छैन ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ को बोचमा रहेको तिलोत्तमा हिमाली फूड प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको जग्गामा लामो समयदेखि ७४ नं. टावर निर्माण हुन नसकेपछि टावर निर्माणका लागि प्रशासनले प्रहरी नै परिचालन गर्नुपरेको छ । आफ्नो जग्गाबाट प्रसारणलाइन लैजाँदा व्यवसाय प्रभावित हुने कम्पनीले टावरको रुट सार्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो । तर अदालतले समेत स्टे अर्डर दिनु नपर्ने आदेश दिएपछि प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरी टावर निर्माण थालेको हो ।
बोचमै विद्युत्को तारमुनि घरहरू पर्ने अवस्था भएपछि स्थानीयले टावर सार्न माग गरेका थिए । स्थानीयसँग प्रशासन र आयोजनाले पटक पटकको छलफलमा सहमति नभएपछि प्रहरी उपस्थित गराएर काम सुरु गराएको हो । प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख राजन ढुंगेलले अहिले टावरको जग तयार गर्ने काम भइरहेको बताए ।
“यही टावरमा आयोजनाको काम रोकिएको थियो,” उनले भने, “अब अरु टावरको काम लगातार सुचारु हुन्छ ।” कम्पनीले भने चिस्यान केन्द्र, माछापालन पोखरीलगायतको संरचनाका लागि ३० करोड क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । तर आयोजना प्रमुख ढुंगेलले प्रसारण लाइनबाट हुने घर जग्गा, र सबै संरचनाको क्षतिपूर्ति सरकारी मूल्यांकन समितिको निर्णयअनुसार हुने बताए ।
यस्तै, भीमेश्वर नगरपालिका–९ झिंगानेमा पनि स्थानीयले प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् । झियानेको भूकम्पभन्दा अघि सर्भे गरेको ठाउँमा स्थानीयले भूकम्पपछि घर बनाएका छन् । त्यो ठाउँमा रुट परिवर्तन गर्न स्थानीयले माग गरेका हुन् । प्रसारण लाइनको झियानेमा ८१, ८२, ८४ र ८६ न नं. टावरमा समस्या छ । सबैभन्दा जटिल समस्या बोचमा भएकाले बोचको समस्या समाधान भएकाले झियानेमा काम गर्न सकिने आयोजना प्रमुख ढुंगेलले बताए ।
४० किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने १२४ टावरमध्ये समस्यामा परेकाबाहेक सबै टावर ठड्याउने काम सम्पन्न भएको छ । ३२ किलोमिटर सिंगल सर्किट तारसमेत टांगिएको छ । सिंगटी खोला र खानी खोला तथा खारे खोला बेसिनमा निजी क्षेत्रका निर्माण भएको जलविद्युत् आयोजनाहरू यही प्रसारणलाइन कुरेर बसेका छन् । प्रसारणलाइन पूरा नहुँदा आयोजनासमेत समयमा निर्माण पूरा गर्न सकेका छैनन् । १० मेगावाटको सिप्रिङ, ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोला, ५ मेगावाटको घट्टे खोलाको विद्युत् खेर गइरहेको छ । २५ मेगावाटको सिंगटी खोलाले पनि आयोजना पूरा गरेर परीक्षण गरिरहेको छ ।
३० मेगावाटको खानी खोला र ४० मेगावाटको खानी खोला १ आयोजनाले काम अन्तिम चरणमा पुगेर पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यसले आयोजनाका लागत बढाइरहेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले स्थानीय अवरोध हटाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन आएकाले समन्वय गर्दै बलसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अवरोध गर्नेसँग आवश्यक छलफल गर्दै कानुनी रूपमा काम गरेको उनले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ठेकेदार कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरसँग सन् २०१० अक्टोबरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र प्रसारणलाइन र सिंगटीको सबस्टेसनसमेत निर्माण गर्ने रहेको थियो । तर १० वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रसारणलाइन बन्न सकेको छैन ।
सम्झौताअनुसार सबस्टेसनका लागि साढे १७ करोड र प्रसारण लाइनका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँमा अरावलीले ठेक्का लिएको हो । ठेकेदार कम्पनी पहिलो पटक म्याद थप भएपछि सम्पर्कविहीन छ । अहिले स्थानीय प्रतिनिधिले काम गरे तापनि स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।